कसरी खानेकुरा पकाउँदा पोषक तत्व नष्ट हुँदैन ? | सुदुरपश्चिम खबर
कसरी खानेकुरा पकाउँदा पोषक तत्व नष्ट हुँदैन ?
जतिसक्दो ताजा खानेकुरा खाने बानी गर्नुपर्छ । लामो समयसम्म राखेको खाना वा वासी खानाबाट पोषण तत्व क्रमश कम हुँदै जाने गर्छ । जसका खाना खानु र नखानु लगभग एउटै जस्तो हुनपुग्छ । त्यसैले, खानालाई सकेसम्म पकाउना साथ खाँदा राम्रो मानिन्छ । (gnewsnepal.com बाट सभार)
योगसूत्र : कसरी निरोगी रहने ? योग र ध्यानको फाइदाहरु !!